Global Voices teny Malagasy » Mitady tonian-dahatsoratra ny Global Voices hitarika ny fandrakofany momba an’i Azia Afovoany Lehibe. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Febroary 2021 7:23 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Noubel Nandika Lauren RAJAOBELINA
Fikambanana manerantany sy virtoaly ny Global Voices. Ny milana manodina ny efitrano fampahalalam-baovao Global Voices dia ekipa mpanonta miasa tapa-potoana  izay miaraka miasa amin'ireo mpandray anjara sy mpandika teny an-tsitrapo eran'izao tontolo izao mba hanasongadinana ireo tantara sy fomba fijery izay zara raha aseho amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Alefaso amin'ny jobs@globalvoices.org  ny famintinana sy taratasy filazana fahavononana, atao amin'ny teny Anglisy, izay manasongadina ny asanao ary manazava ny antony mahatonga anao ho mendrika tsara amin'ilay toerana, ka lohahevitra ny hoe: Tonian-dahatsoratra ho an'i Azia Afovoany Lehibe: ny anaranao. Azafady, ampidiro ho toy ny failo .doc na .pdf araikitra, ankoatra ny fampidirana azy ao anatin'ny votoatin'ny imailakao, ilay tatarsy filazana fahavononana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/02/05/151121/
 iraka sy ny soatoavin'ny Global Voices.: https://globalvoices.org/about/
 mpanonta miasa tapa-potoana: https://globalvoices.org/our-people/